Nanami Construction Co. , Ltd. ဆိုက်အလုပ် [Genvers] အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်း
Nanami Construction Co. , Ltd. ကွင်းဆင်းအလုပ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများ
Nanami Construction Co. , Ltd. အလုပ်များ
Nanami Construction Co. , Ltd. သည်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်
၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့သောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ex အတွေ့အကြုံမရှိသူ - လှုံ့ဆော်ခံရပြီးစိတ်အားထက်သန်သောလေးနက်သောပုဂ္ဂိုလ်☆အတွေ့အကြုံရှိသူ - သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သည့်နေရာမှကျွန်ုပ်တို့စွန့်ခွာပါမည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင်အကြီးတန်းဝန်ထမ်းများသည်သင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာလျှောက်ထားပါ။
Nanami Construction Co. , Ltd. အလုပ်အကိုင်အကျဉ်းချုပ်
ရေပေးဝေရေးစက်ရုံလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအလုပ် / ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း / မိလ္လာစက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာ ၀ န်ယူမှုရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးရေဖြန့်ဝေမှုသေးငယ်သောပိုက် / ရေဖြန့်ဝေမှုအဓိကလမ်းမကြီးလမ်းခင်းခင်း / မြို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
[ကုမ္ပဏီ] နေ့စဉ်လစာငွေ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း (လစဉ်လစာ)
[Wako အရောင်းရုံး] Shimoniikura မှအုပ်စုလိုက်စီး။ site သို့သွားပါ
တိုကျိုမက်ထရို Yurakucho လိုင်းရှိ [Heiwadai ဘူတာ] မှ ၁ မိနစ်လမ်းလျှောက်ရမည်
Nanami ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။
* ဖုန်းခေါ်ရန်နံပါတ်ကိုနှိပ်ပါ။hours ည့်ခံချိန်များ (ရုံးဖွင့်ရက်များ) မှ 9:XNUMX မှ XNUMX:XNUMX
၎င်းသည်တစ်သက်တာအတွက် "သင်၏လက်၌အလုပ်" ရရှိရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
"လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်မှု" သူများမှာအတွေ့အကြုံမရှိသူများပင်
ကျနော်တို့ကအစကနေ back up ပါလိမ့်မယ်။
ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်များ" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါ!
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!
၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ထမ်းများမှစိတ်ရင်းမှန်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ရှိသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊
ပညာရေးနောက်ခံ၊ အလုပ်သမိုင်း၊ အသက်၊ အရည်အချင်း၊ အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။ * ရုံးတင်စစ်ဆေးချိန်ရောက်သည်
young နုပျိုသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မှ ၀ န်ထမ်းများအားစစ်မှုထမ်းဟောင်းများထံသို့ပို့ဆောင်မည့်လူအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။
industries other အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်အကိုင်များကိုပြောင်းလဲသူများ》 bl ကွက်လပ်ရှိသူများ welcome လည်းကြိုဆိုသည်
Ser "လေးနက်သော" "စိတ်အားထက်သန်မှု" အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်လိုသောသူများ!
motiv အကယ်၍ သင်ကလှုံ့ဆော်ခံရလျှင်၊
8: 00-17: 00 ◇အလုပ်ချိန် - ၂ နာရီချိုး၊ ၇ နာရီအမှန်တကယ်အလုပ်
available ရရှိနိုင်သောအပိုဆုကြေး (ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည်)
available အဆောင်ရရှိနိုင်ပါသည် (စျေးပေါသောနေ့လယ်စာနှင့်အတူ)
တနင်္ဂနွေနေ့များ၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ၊ ရွှေရောင်ရက်သတ္တပတ်၊ နွေရာသီ / နှစ်ကုန်နှင့်နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များ★ရက်သတ္တပတ်အားလပ်ရက်များကိုကြိုတင်ကြေငြာခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်
အစီအမံများရှိပါသည် (အစီအမံများဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီ - ပြင်ပဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)
industries ★ other အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်ပြောင်းရန်စဉ်းစားသူများ☆★☆
အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများပင်ကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ကြသဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ လျှောက်ထားရန်လွတ်လပ်စွာ feel လျှောက်ထားပါ။ ♪ဤသည်မှာတစ်သက်တာအရည်အချင်းပြည့်မှီရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် GUTS များကိုကောင်းမွန်စွာအကဲဖြတ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြproblemsနာအမျိုးမျိုးနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်!
4-25-12 Heiwadai, Nerima-ku, Tokyo
◇တယ်လီဖုန်း (တယ်လီဖုန်းလျှောက်လွှာကိုလက်ခံသည်။ ) ception ည့်ခံချိန် (အပတ်များ) ၉း၀၀ မှ ၁၇း၀၀ နာရီ
application လျှောက်လွှာပုံစံ (၂၄ နာရီ reception ည့်ခံခြင်း) ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ အင်တာဗျူးများနှင့်ငှားရမ်းမည့်နေ့ရက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ your ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လျှောက်လွှာအားလျှို့ဝှက်ထားပါမည်။
0339312030 hours ည့်ခံနာရီ (ရုံးဖွင့်ရက်များ) မှ 9:XNUMX မှ XNUMX:XNUMX
[ဌာနချုပ်] 4-25-12 Heiwadai, Nerima-ku, Tokyo ★ဘူတာရုံရှေ့တွင်★မြေအောက်ရေရှိမိုးရွာရွာ၌ပင်စိုစွတ်ခြင်းမရှိဘဲရုံးသို့လာနိုင်သည်။ မြေပုံကိုကြည့်ပါ
Teshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုကြိုဆိုသည်
Nanami ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်※"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။